तपाइहरुले शैलेजाले संसदिय समितीमा दिएको प्रश्न उत्तर सुन्नुभयो?
छिटो भन्नुहोस,मलाइ अन्य कार्यक्रममा जान हतार छ रे? देश त आफ्नै बिर्ता जस्तो। कुजाता भन्दा पनि अरु केही भन्नु छैन यिनी मैयासापलाइ?
बाउको पावरको भरमा मान्छेलाई मान्छे नगन्ने यिनले देश र जनताको लागि काम गर्नु भन्दा पनि बाउको बिर्ता स्वरुपको देशरुपी "लालीपप" चुस्न सरकारमा गएकी हुन । विना बन्दुक पनि देशलाई बाउको विर्ता ठान्ने यिनी यस्ता जनता, संसदीय समिती आदि इत्यादि हैन माओबादी प्रभु र भारत प्रभुलाई मात्र गन्छिन ।
I dont know much about Sujata, is the most capable among congress so she is in important post? If not why other congress people supports her or let her to be in this important position?
Wasnt she had NGO earlier?
जनताले जिताएर पाएको पद भएपो जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्थ्यो । बाउ टट्टु अनि छोरो लट्टु ! मज्जाले नाचिरहेकी छिन् अहिले । अनि नचाइरहेकीछिन् नेपाली जनतालाई आफ्नै तालमा ।
अनि नेपालियनजी के साह्रो बुझपचाउनुभएको हो ! माओवादीका बारेमा पाखुरा सुर्काई-सुर्काई कुरा गर्नुहुन्छ; तर सुजाताको बारे त्यति थाहा छैन भन्नुहुन्छ । पत्याउने कुरा गर्नुस् न । अँ उनलाई उनकै दलका सदस्यहरूको समर्थन थिएन; गिरीजाले बाध्य पारेका समर्थन गरेका मात्र हुन् ।
पोस्तक जी धेरै समय पछि गफ गर्ने मेसो मिल्यो। बेला बेलामा गफमा सामेलहुंदै गर्नुहोला।
माओबादीसित पाखुरा सुर्केर कुरा गर्यो भन्नुभयो, माओबादीबारे धेरै सिक्ने अबसर मात्र नमिलेको होइन
माओबादीको जंगली ब्यबहारबाट केही पटक ज्यानै जोगाउने भाग्य पनि मिलेको छ। यस बारे दौंतरीमा लेखौंला भनेको
त्यस्तै भएको छ। कुनै बेला ब्लगमा राखौंला।
अब रह्यो शैलेजाको कथा कुथुंग्रि बहने पालो। यिनी शुस्मा कोइराला मेमोरियल ट्रष्ट चलाएर बसेको थाहा थियो। नेपालकी छोरीले राम्रै काम गरिन भनेर ठान्थे। पछि कताबाट राजनितीमा आइन र कसरी उप-प्रम भइन भन्ने मेसो भने मैले पाइन। उनको बारेमा जान्ने अबसर २ पटक मिल्यो - १) माधब नेपाल भारत जांदा उनी नगएर पत्रकार सम्मेलन गरेको बेला २) संसदिय समितीसंग पासपोर्ट छाप्न किन रोकेको भन्ने बारेमा। त्यस बाहेक अन्य जानकारी नभएको हुंदा मैले प्रश्न राखेको हुं। उनी गिरीजा पूत्री भएको त सबैलाइ थाहा नै छ,त्यो त किन सोध्नु पर्यो र हैन त?